Madaxweynaha Hirshabeelle oo kulamo la qaatay qeybaha bulshada ee gobolka Hiiraan – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Hirshabeelle oo kulamo la qaatay qeybaha bulshada ee gobolka Hiiraan
Madaxweynaha Maamul-goboleedka hirshabeelle Mudane Cali Cabdulahi Cosoble oo ay wehliyaan qaarka mid ah Xildhibaanada iyo Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa maanta kulamo la qaatay qeybaha kala duwan ee Bulshada ee ku nool Magaalada Beledweyne.
kulamadaasi oo ku saabsanaa sidii ay Bulshada iyo waxgaradka ula shaqeyn lahaayeen Maaamulka cusub ee hirshabeele, iyadoo lagu soo waramayo ay Saxaafadda dibad joog ka aheyd ayaa markii uu la soo gaba- gabeeyay, waxaa Warbahinta la hadlay Madaxweynaha Maamul- goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullahi Cosoble.
Mudane Cali waxa uu sheegay in Magalada Beledweyne si wanaagsan loogu soo dhaweeyay, isagoo xusay in uu kulamo la qadaatay waxgaradka iyo cuqaasha, kana hadlay xukuumada maamulka uu soo dhisi doona in dhalinyaradu kaalin ballaran ku yeelan doonaan,waxaana uu sheegay in loo bahan yahay in laga faaideysto maskaxda dhallinyara.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka codsaday Bulshada ku noo Gobolada uu ka kooban yahay Maamulka hirshabeelle in ay u istagaan sidii aya Maamulka ula shabeyn lahaayeen,waxaana u sheegaya in shacabka ay isku diyariyaan horumar iyo nolaal wanaagsan maadaama uu leeyahay bad iyo webiyo.
Madaxweynaha Maamul-goboleedka hirshabeelle ayaa socdaalkiisu Magaalada Beledweyne uu ka qeyb yahay qorshahii uu horay u ballan qaaday oo ay ka mid ahssyeend in Dowladnimada la gaarsiiyo dhammaan Deegana Maamulka Hirshabeele .
Howlgallo qorshaysan oo Ciidamadda Xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka fuliyeen Degmadda Afgooye